OLPC Orogoay: Tontosa tamim-pahombiazana ny fifaninanana bilaogy nasionaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2019 4:19 GMT
Tus Ideas Valen (Ny hevitrao) dia fifaninanana hevitra sy tetikasa fampidirana ny fanavaozana ho an'ny tanora ao Orogoay. Tus Ideas Valen no nikarakara ny fifaninanana voalohany indrindra mibilaogy any an-tsekoly (National School Blogging) ho an'ny mpianatra. Notohanan'ny Plan Ceibal sy ny nahazo vatsy ara-bola kely avy amin'ny Rising Voices, OLPC Uruguay miaraka amin'ireo fikambanana maro hafa izany hetsika izany.
Ireo songadina amin'ny fitsipiky ny fifaninanana dia:
Mahazo mandray anjara ireo mpianatry ny sekoly fanabeazana fototra sy ny sekoly ambaratonga faharoa fototra tafiditra amin'ny tetikasa Ceibal Plan mampiasa solosaina finday XO.
Ny ekipa misolo tena ny kilasy misy azy ireo no mahazo mandray anjara, mety ho ekipa mihoatra ny iray isaky ny kilasy izany. Malalaka ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa.
Tsy maintsy ahitana lahatsoratra (vaovao) 10 farafaharatsiny ny bilaogy momba ireto lohahevitra manaraka ireto: a) ny fiantraikan'ny Plan Ceibal eny amin'ny sekoly, fianakaviana ary ny fiarahamonina, b) famokarana sy fampiasana olona monina ao amin'ny faritra misy anao, c) tantara, angano sy arirarira eo amin'ny faritra misy anao, olona ao amin'ny faritra misy anao na faritra manodidina anao, d) ireo endriky ny tontolo iainanao an-tanandehibe ary ny ara-jeografika,) ny sekolinao (na ny sekoly ambaratonga faharoa misy anao), ny kilasinao ary ny zavatra ianaranao isan'andro. f) manao tafatafa amin'ny fakan-tsary amin'ny fampiasana ny XO, indrindra ny tantaran'ny raibe sy renibe, g) aseho amin'ny sary iray nalaina tamin'ny XO farafahakeliny ny fampahalalana tsirairay. Ny mpampianatra sy ny profesora no manoro hevitra sy manohana ireo ekipa mba hivoahan'ny blaogin'izy ireo.
Homena izay bilaogy tsara indrindra ny loka. Finday hiaka farany 3.7g sy atrikasa no loka
Betsaka ny sekoly / mpianatra nandray anjara tamin'ny fifaninanana ary bilaogy 10 no nomena voninahitra tamin'ny loka maro, anisan'izany ny fianarana manokana momba ny fampiasana ny bilaogy, ny famoahana horonan-tsary ary ny fahaizamanao hafa. Nitarina hatramin'ny 8 Novambra ny daty fara-fandraisana raha 31 Oktobra teo aloha.
Ahitana ny Prof. Rodolfo Pilas, Raul Etcheverría, Mariana Herrera ary Profesora César Barretto Luchini ny mpitsara. Tsy nisy nandresy ny sekoly avy any Montevideo renivohitra.
Ity ny lisitra misy ireo tafakatra famaranana:
Loka voalohany ho an'ny bilaogy manokana tsara indrindra any an-tsekoly
Jonathan Alvarez ao amin'ny Escuela 47 de 25 de agosto, Florida – (Sekoly 47, 25 Aogositra, Florida)
Loka Voalohany ho an'ny bilaogy an-dakilasy tsara indrindra tany an-tsekoly
Escuela 5 de Salto, 6to año – (Mitsambikina sekoly, taona faha- 5, 6)
Loka manokana avy amin'ny mpitsara:
Escuela 1 de Trinidad, 6to año – (1 Sekoly Trinité, taona faha-6)
Escuela 93 de Maldonado, 5to año B – (Sekoly 93, Maldonado, B taona faha-5)
Escuela 68 de Sarandí Grande, 6to año – (68 de Sarandi Grande School, taona faha-6)
Escuela 34 de Young, 6to año- (Sekoly 34, Tanora, taona faha-6.)
Escuela 136 de Salinas, 5to A – (Sekoly 136, Salinas, taona faha-5 A)
Escuela 153, de Parque del Plata 6to C. – (Sekoly 153 ao Parque del Plata the 6th C.)
Escuela 60 Arrozal 33, Treinta y Tres – (Sekoly 60 Paddy 33, telo amby tepolo)
Escuela 107 de Salto, 5to año. – (107, Sekoly Falls, taona faha-5)
Nisy ny lanonana fanolorana loka natao tamin'ny asabotsy 19 desambra 2009 tao amin'ny Plaza Matriz tao an-drenivohitra Montevideo. Ity ny horonantsary momba ny lanonana [es]:
Ceibal Florida Blog mitatitra hoe:
Nanatrika ny lanonana fanolorana loka ny Minisitry ny Fampianarana sy ny Kolontsaina Maria Simon, izay nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny Tus Ideas Valen. Nilaza tamin'ireo mpandray anjara izy fa nitsidika ireo bilaogy noforonin'ireo mpandray anjara ny zanany ary toa tena tsara izy ireo.
Jereo azafady ny bilaogin'ireo mpandray anjara. Nanoratra momba an'i Jonathan ny gazety eo an-toerana La República:
Nahazo ny loka ho an'ny bilaogy tsara indrindra any an-tsekoly tamin'ny firenena iray i Jonathan. Nihoatra ny 6000 no nitsidika ny bilaoginy, nanjary iray amin'ny teboka fihaonan'ireo izay te hahalala bebe kokoa momba ny Plan Ceibal sy ny asan'i Jonathan sy ny sekoliny ny bilaogin'i Jonathan.
Sary nalaina tamin'ny bilaogin'nyTus Ideas Valen sy Ceibal Florida Blog. Ny milina mpandika teny (Google translate) no nanao fandikan-teny rehetra
24 ora izayHafanàm-po nomerika